Tatitry ny loza pentekosta Olona 3 maty, 2 zazarano ary 205 nandalo vonjy aina
Telo no maty nandritra ny fetin’ny pentekosta raha ny tatitry ny talen’ny kabinetran’ny minisiteran’ny filaminam-bahoaka, ny CPP Albert Estel Ainanirina, omaly antoandro.
Ny roa vokatry ny lozam-pifamoivoizana nodomina fiara roa samihafa izay nitsoaka avokoa. Ny fanintelony kosa dia vehivavy iray 49 taona, teny Besarety izay hita faty ny faran’ny herinandro teo. Zazarano roa koa no hita izay vokatry ny fanalan-jaza. Araka ny fampitam-baovao teo anivon’ny HJRA Ampefiloha, omaly antoandro ihany, nihena ny isan’ny maty sy naratra ary ny naiditra hopitaly raha mitaha tamin’ny taon-dasa. Nahatratra 27 ireo nanao fizaham-pahasalamana. Ny nandalo tao amin’ny vonjy aina kosa nisy 205 ka ny 36 tamin’ireo voatery notazomina ary nisy ny nandalo fandidiana. Roa no maty. 67 loza vokatry ny disadisa teo anivon’ny fiarahamonina. 43 voadonan’ny lozam-pifamoivoizana. Ny trangana loza tany an-tokantrano kosa nananika ny 31 ary 4 ny loza noho ny asa. Nahitana trangana loza 17 teny an-dalambe. Efatra no voapoizina noho ny fibobohana zava-pisotro mahamamo. Nahitana karazana halatra ihany koa nandritra ny fety, araka ny vaovao ofisialin’ny polisy, tahaka ny vaky trano 1, sinto mahery 8, halatra môtô 2.